မတူတဲ့လူနဲ့ အတူနေရင် မတူတဲ့ဘ၀ကိုရမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မတူတဲ့လူနဲ့ အတူနေရင် မတူတဲ့ဘ၀ကိုရမယ်
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်မှာ “လူဆိုတာ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေကို နားလည်တဲ့ တစ်မျိုးတည်းသော သတ္တ၀ါဖြစ်တယ်။ အကောင်းဘက် သွယ်ဝိုက်တဲ့စကားတွေက လူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ စိတ်အခြေအနေကို အကောင်းဘက် သက်ရောက်စေတယ်။ ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးတွေကို လှုံဆော်ပေးတယ်။ လုပ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးတယ်။ ရှေ့သို့တက်လှမ်းစေတယ်၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်စေတယ်”
မှန်ပါတယ် . . . တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုးပေါ့ . . .
ကျနော်တို့ တတွေက တစ်ဦးတည်းတစ်ယောက်ထဲမှနေလို့မှ မရတာ။ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နေကြရတာဆိုတော့ ကိုယ့်ပေးပတ်ဝန်းကျင်က ကောင်းဖို့လိုတာပေါ့။ အောင်မြင်ဖို့ တိုးတက်ဖို့ ကြိုစားနေချိန်မှာ ကျနော်တို့ အမြင် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် ပိုတော်တဲ့ သူ၊ ကိုယ့်ထက်ပို တက်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ထက်ပိုအောင်မြင်တဲ့သူ တွေကို လေ့လာရပါတယ်။ အတုခိုးရတာပေါ့။
ထူးကဲသူနဲ့နေချင်ရင် သင်ထူးကဲရလိမ့်မယ်။ ဒီစာသားလေး က အရမ်းမှန်တယ်။…..